जेपी गुप्ताको स्मृतिमा खुमबहादुर खड्का – Gorkha Sansar
गोर्खा संसार २०७४, १८ चैत्र आईतवार ११:१३
काठमान्डौं, १८ चैत ।
यो कोठाको फलामे ढोकाबाहिर सँगै जोडिएको सानो चर्पी छ, जहाँको घोर दुर्गन्धले नुहाउन र मुख धुन पनि सम्भव छैन। त्यसका लागि हामी माथिल्लो तलास्थित प्रहरी जवानहरूले प्रयोग गर्ने चर्पीलाई प्रयोग गर्न दिन अनुरोध गरेका थियौँ। एक प्रहरी जवानले खुमबहादुरजीलाई खबर गरेछन्, ‘त्यसो गर्न मिल्दैन’ भनेर। कोठामा एक दुर्इ वटा कपडा झुण्ड्याउने ह्यांगरको व्यवस्था भएको छ, मिनरल वाटरको बोतललाई बीचबाट आधा काटेर स्ट्रे बनाएका छौँ। खुमबहादुरजी भन्नुहुन्छ, ‘जेपीजी, किन यी सब गरिरहनु भएको? कति नै बस्नु पर्छ र?’ तर मलाई लाग्छ,हामी चाँडै छुट्दैनौँ।
कोठाका झ्यालहरूमा रहेका ‘भेन्टिलेसन’का खापाहरूमा ग्रिल नभएकाले क्रुरतापूर्वक किला ठोकेर त्यसलाई बन्द गरिएको छ। बाथरुमको भित्रि भागबाट ढोका बन्द गर्न लगाइको छेस्कनी उखेलिएको छ। मूल ढोकाको छेस्कनीलाई पनि बलपूर्वक उखेलिएको छ। छतमा बिजुलीपंखा झुण्ड्याउन लगाइएको अंग्रेजीको ‘यू’ आकारको हुकलाई हथौडाले हिर्काएर छत तिरै मोडिएको छ। निराशाले विक्षिप्त भएर हामी झुण्डिएर आत्महत्या गर्न नसकौँ भनेर यसो गरिएको होला। राम्रो कोठालाई यसरी दुःखपूर्वक थुनुवा कोठामा रूपान्तरण गरिएको प्रष्टै देखिन्छ।
यसका अतिरिक्त हाम्रो विशेष निगरानीका लागि छुट्टै प्रहरीको व्यवस्था गरिएको छ। हालै भर्ना भएका केही युवा र अनुभवी अधिकृतहरूलाई समेत खटाइएको छ। तत्कालका व्यवस्थाका लागि यस गणका गणपति एसपी र अन्य अधिकृतहरू आएका थिए। वास्तवमा हामीप्रति उनीहरूको चासो प्रशंसनीय छ। बास–व्यवस्था आदि सुविधाका सम्बन्धमा उनीहरू बडो फरासिला देखिए तर भरे भोलि बिस्तारै सोध्नुपर्ने एउटा कुरा मैले पहिलो भेटमै सोधेर आफूलाई दुखित तुल्याइसकेको छु। मैले सोधेको थिए, ‘हामीलाई भेटघाट गर्न दिनेबारे के नीति छ?’ उनीहरूले रत्ति पनि अपठ्यारो नमानी भने, ‘माथिको आदेशबिना यो सम्भव छैन।’
वास्तवमा रातका वेला निर्क्योल गर्नुपर्ने विषय यो थिएन। जे होस्, बासका लागि भने आज लगभग यो कोठाका सबै व्यवस्था पूरा भएका छन्। हामीले पनि अब थप अन्यथा नभए यहीको परिवेशमा आफ्ना दिनचर्यालाई नियमित गर्न चाहेका छौँ। तर, बिहान सबेरै यो साँघुरो सानो कोठामा थप एक खाट हुलियो। खुमबहादुर जीले प्रहरी भाइलाई सोध्नुभयो, ‘को आउने हो?’ विचरा उनलाई थाहा थिएन। पछि थाहा भयो, खाट चिरञ्जीवी वाग्लेका लागि थियो। उहाँलाई यहीँ ल्याइयो।
अब खुमबहादुरजी पनि भन्न थाल्नु भयो, ‘लामै बस्नु पर्छ क्यारे! बरु हामीलाई जेलमा सारियोस्।’ तर, अहिले हामी अख्तियारको थुनुवा भएकाले यो सम्भव नभएको मेरो तर्क छ।
राजाले असोज १८ गते शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि लोकेन्द्रबहादुर चन्दको सरकारलाई मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने, स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गराउने, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने, सबै तहबाट भ्रष्टाचार हटाउने जस्ता जिम्मेवारी दिएका छन्। यो नेपाली जनताले तत्कालै ठम्याउन नसक्ने राजाको ठूलो पाखण्ड हो। बयानको क्रममा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले आफ्नो सेखी देखाउँदै मलाई भनेका थिए, ‘राज्य चलाउन राजनीतिक दलहरूको कुनै एजेण्डा भएन। त्यसैले राजाद्वारा केही निश्चित एजेण्डा निर्धारण गरेर राज्यको कार्यकारिणी अधिकार लिइएको हो। यिनैमध्ये भ्रष्टाचार हटाउने राजाको एउटा मुख्य एजेण्डा हो। तसर्थ राजाको सदासयतालाई साकार पार्न हामी कारबाही गरेरै छोड्छौं।’
गुप्ताले शनिबार राति ‘खुमबहादुर खड्कासँग थुनामा रहँदा ०५९ कात्तिक १५, १६ र १७ का केही स्मरण’ नाममा राखेको लामो ‘स्ट्याटस’ ।
एम्नेष्टी समूह २७ लमजुङद्धारा राइट फर राइटस अभियान अन्तर्गत ८ हजार हस्ताक्षर संकलन
२०७६, ६ पुष आईतवार ०७:०१
पहिरोले खानेपानीको पाइप बगाएपछि गाउँमा पानीको हाहाकार
२०७७, २५ असार बिहीबार २१:२८
पछिल्लो २४ घण्टामा थप ३४३९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
२०७७, २२ आश्विन बिहीबार ०६:४४